Fiatrehana ny fifidianana: hanohana an-dRajoelina ny Leader Fanilo sy ben’ny Tanàna 1000 | NewsMada
Manao tohivakana. Nisesy ny fanambarana fanohanana ny kandidà Rajoelina amin’izao hiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa. Anisan’izany ny eo anivon’ny Leader Fanilo sy ireo ben’ny Tanàna.
Nanapa-kevitra ny birao nasionalin’ny Leader Fanilo, nivory ny asabotsy teo fa hanohana ny kandidà Rajoelina. “Entanina ny mpikambana manerana ny Nosy hanao ny ezaka rehetra hampandaniana ny kandidà laharana faha-13”, hoy izy ireo. Nentanin’izy ireo koa ny mpikambana hametraka fitokisana amin’ny kandidà Rajoelina.
Nialohavan’ny dinika sy famakafakana ny raharaham-pirenena izany. Teo koa ny nihainoana ny vinan’ny kandidà roa hiatrika ny fihodinana faharoa. Nohamafisin’ity antoko naorin-dRazafimahaleo Herizo ity fa mametraka ho ambony ny fampandrosoana mitsinjo vahoaka eny ifotony ny foto-kevitra ijoroan’izy ireo.
Ben’ny Tanàna anarivony…
Mifototra amin’ny firaisankinam-pirenena, ady amin’ny fahantrana, tsy fandriampahalemana, fitsinjaram-pahefana tena izy, fanjakana tsara tantana , ady amin’ny kolikoly. Fanaovana ho lohalaharana ny tanora sy ny vehivavy.
Etsy andaniny, nanao fanambarana koa ny Fikambanan’ny ben’ny Tanàna miara-dia amin-dRajoelina (Fibemiar) avy amin’ny faritra 22, tetsy Andavamamba, omaly. Nambaran’izy ireo tamin’ny izany fa resy lahatra amin’ny vinan’ny kandidà laharana faha-13 izy 585 mianadahy mianaka nisolo tena ireo ben’ny Tanàna anarivony, manohana ny mpanorina ny IEM. “Maty paika ny azy ny vina ary mamaly ny filan’ny vahoaka, eo amin’ny fandriampahalemana, ny sosialim-bahoaka…. Tsy hivadika ary manatanteraka ny ambarany”, hoy izy ireo.